Ole Gunnar Solskjaer oo ka jawaabay keyd uu fadhiisiyay Cristiano Ronaldo kulankii Everton | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Ole Gunnar Solskjaer oo ka jawaabay keyd uu fadhiisiyay Cristiano Ronaldo kulankii...
Ole Gunnar Solskjaer oo ka jawaabay keyd uu fadhiisiyay Cristiano Ronaldo kulankii Everton
Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in saamayntii qiirada lahayd ee ciyaartii Champions League ee Arbacadii ay la ciyaareen Villarreal ay qayb ka qaadatay go’aankii uu kursiga keydka dhigay Cristiano Ronaldo booqashadii Everton .
Laacibka shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or wuxuu isku arkay inuu ka mid ahaa xidigaha keydka fadhiya kulanki Premier League, iyadoo Edinson Cavani iyo Anthony Martial ay labaduba kasbadeen Old Trafford.
Ronaldo ayaa shabaqa soo taabtay daqiiqaddii shanaad ee waqtiga dheeriga ah si uu ugu guuleysto maalinta Man United oo ay ka hortageen Villarreal bartamihii isbuuca, Solskjaer ayaana hadda sharraxay sababta ka dambeysa inuu ka maqnaado safka koowaad.
Solskjaer ayaa u sheegay suxufiyiinta: “Waxaad qaadanaysaan go’aamo muddo dheer oo dheer waana inaad maareysaan culeyska shaqada ciyaartoyda, go’aanka aniga ahaan wuxuu ahaa mid sax ah.
Goolkii uu Ronaldo ka dhaliyay Villarreal ayaa ahaa kiisii ​​shanaad oo uu ka dhaliyo maaliyadaha United xilli ciyaareedkan, isaga oo guud ahaan kooxda u dhaliyay 123 gool 297 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Previous articleMuxuu R/Wasaare ROOBLE kala hadlay taliyeyaashii uu maanta la shiray? + Sawirro
Next articleAhlu-Sunna oo kusii siqeysa Dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda
Liverpool ayaa garoonkeeda ku soo dhaweeneysa kooxdea Man City ka hor kulanka waxaa la shaaciyay shaxda rasmiga ee ciyaarta. James Milner ayaa ka bedelaya Trent...
Tammy Abraham oo dib loogu yeeray xulka England ee isreeb -reebka...